အခမဲ့POS. Point of Sale System. Loyverse POS
စတိုးဆိုင်၊ ကော်ဖီ၊ အလှကုန်ဆိုင်များစသည်တို့အတွက် အခမဲ့ကွန်ပျူတာအရောင်းစနစ်ပါ
သင့်ဆိုင်နှင့် ရောင်းချမှုများကို စမတ်ဖုန်း(သို့) တဘလတ်တို့နှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်- လွိုင်ဘာ့စ် အရောင်းစနစ်ဖြင့် လွယ်ကူစွာရောင်းချပြီး သင့်လုပ်ငန်းငယ်အား အကျိုးအမြတ်ပိုစေသည် ကုန်ပစ္စည်းမစီမံခြင်း အရောင်းအားပုံပြခြင်း ဈေးဝယ်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ အရောင်းမြှင့်နိုင်။
အကြွေးဝယ်ကဒ်မလို။ ကြော်ငြာမပါ။ စာချုပ်မလို။
စမတ်ဖုန်း (သို့) တဘလတ်တွင် လွိုင်ဘာ့စ်ကိုထည့်ပါ၊ ရောင်းချမှုစတင်ပါ၊ အကောင့်ဖွင့်ပါ။
အကောင့်တစ်ခုမှ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မက ထိန်းနိုင်ခြင်း။ သင့်စမ်းစစ်မှုများဟာ အမြဲတမ်းသင်နှင့်အတူရှိသည်။
ဖောက်သည်ထိန်းထား ယုံကြည်စွာအသုံးပြု သင့်အရောင်းကိုမြှင့်
လွိုင်ဘာ့စ်အရောင်းစနစ်ကရိုးရှင်းလို့ကြိုက်သည်၊ ပစ္စည်းများကို အရောင်၊ပုံစံများဖြင့် ခွဲခြားသည်။ ခလုတ်၂ခုလောက်နှိပ်လိုက်သည်နှင့် အလုပ်ပြီးမြောက်သည်။ ဖောက်သည်၏ စာရင်းများနှင့် အရောင်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်း ကုန်မှာစာများလည်းပို့နိုင်သည်။
မီမီရဲ့အလှ၊ အက်တလန်တာ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုWoody's Bar, California
ကွန်ပျူတာအရောင်းစနစ်ကို အသားပေးထားပြီး လုပ်ငန်းလိုအပ်များကိုအပြည့်ထည့်ထားခြင်း အိုင်အိုအက်စ်နှင့်အန်းဒရိုက်စနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း အချိန်အမျှ ကြည့်နိုင်ခြင်း ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ အသုံံးပြုနိုင်ခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် လွိုင်ဘာ့စ်အရောင်းစနစ်ကို အသုံးပြုဖို့ အလေးအနက်ထောက်ခံပါသည်။
Giruve အစားအစာနှင့်အကင်၊ ဖိလစ်ပိုင်
အရောင်းစာရင်းများပြုလုပ်သည့်အခါ စာရွက်စာတမ်းများ အစဦးတွင် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း အလိုအလျောက်စနစ်များဖြစ်ထွန်းဖို့ သတိထားမိသည်။ ရောင်းချမှုအခြေအနေ ရောင်းကောင်းသည့်ပစ္စည်းများကို ပြသထားပြီး လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် အခင်းအကျင်း၊ သုံးစွဲမှုလွယ်ကူမှုများနှင့် အခမဲ့ လွိုင်ဘာ့စ် အရောင်းစနစ်က များစွာကူညီနေသည်။
မဲ့ ဘာစီလိုနာ၊ စပိန်
အရာအားလုံးကိုသင့်ဖုန်း(သို့)တဘလက်မှ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာရောင်းချပါ၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်တန်ဖိုးရှိအစီအစဉ်များကို စီမံပါ
ဖောက်သည်စာရင်းပြုစု၍ အမြဲထိတွေ့ပါ။ သင့်ဖောက်သည်များထံ အီးပြေစာနှင့်စာများပေးပို့ကာ တုန့်ပြန်မှုရယူပါ။
မျက်မြင်တိကျတဲ့အစီရင်ခံစာကို မှီ၍အချက်အလက်ပြည့်စုံသည့့် စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ပါ
သင့်ဘရောက်စာရှိရုံးခန်း၊ လွိုင်ဘာ့စ် အရောင်းစနစ်ဖြင့်ချိန်ညှိနေသည်
သင့်အရောင်းအားစူးစမ်းပါ၊ ရောင်းကောင်းသည်များကို ဆုံးဖြတ်ပါ၊ သင်ရောင်းချခဲ့သည်များ ရှာပါ
သင့်ဖောက်သည်များစာရင်းပြုစုပြီး ၎င်းတို့ထံ အသိပေးချက်များပို့ပါ
ဖောက်သည်များ၏ တုံ့ပြန်မှုကို လက်ခံကာ ၎င်းနှင့်ဆက်ဆံမှုကို ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါ
အကောင့်တခုနှင့် ဆိုင်များစွာကို စီမံပါ
အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်း သင့်အရောင်းစာရင်းနှင့် ကုန်းပစ္စည်းစာရင်းများကို ချက်ချင်းသိနိုင်သည့်ဆော့ဝဲလ်
ဝင်ငွေ၊ ပျမ်းမျှ အရောင်းနှင့် အမြတ်ကို ကြည့်ရှုခြင်း
အရောင်းတိုးတက်မှုကို ရက်၊ လ၊ နှစ် အလိုက် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ခြင်း
ပစ္စည်းများကို ရောင်းကောင်း၊ အသင့်အတင့်၊ အရောင်းထိုင်း ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခြင်း
ပစ္စည်းလျော့နည်း၊ မရှိခြင်းကို ချက်ခြင်းသိရခြင်း ကြည့်နိုင်ခြင်း
အမှားနည်းပြီးမြန်ဆန်စွာ စားဖိုချောင်မှအမှာစာများ အလိုလိုရယူပါ။
စောင့်ဆိုင်းချိန် အရောင်နှင့်အမှာစာများကို ဖျက်ခနဲကြည့်ခြင်း
ပြီးဆုံးသွားသော အမှာစာများ အားလုံး လိုအပ်လျှင် ပြန်လည်ဖွင့်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
ဝယ်ယူချိန်တွင် ဝယ်သူအား ဈေးနှုန်းအချက်အလက်ကို ရှင်းလင်းစွာပြခြင်း
ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် ပေးချေငွေ ပြန်အမ်းငွေတို့ကို ပြခြင်း။
ပြင်ဆင်မှု၊လျော့ဈေး၊အခွံတို့ပါဝင်သော အမှာစာအပြည့်အစုံကို မြင်နိုင်သည်။
အီးပြေစာရလိုသော ဝယ်သူများသည် ၎င်းတို့အီးမေးသို့ အလွယ်တကူဝင်နိုင်သည်။
စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် တဘလက်တို့နှင့်ရောင်းချပြီး ဖောက်သည်များထံ အီလက်ထရစ်ပြေစာများ ပေးပို့ပါ။
ပစ္စည်းများကို ရုပ်ပုံ စာသားဖော်ပြချက်နှင့် လွယ်ကူစွာထည့်ပါ။ အမြန်ရှာဖွေရန် အုပ်စုဖွဲ့ပါ။
ဝန်ထမ်းများ၏ ခွင့်ပြုချက်များ အဆင့်အတန်းများ သတ်မှတ်ပါ။ ဘယ်သူအသာဆုံးဆိုတာ အကဲဖြတ်ပါ။
ဖောင်းပွတဲ့စာရင်းများကို မေ့လိုက်ပါ။နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊လစဉ် အစီရင်ခံစာများသည် သင့်လုပ်ငန်းကြီးထွားမှုကို ထောက်ပံ့ပြီးဆုံးဖြတ်မှုများ ချပါ။
ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကို ချီးမြင့်သည် ကိုယ်ပိုင်စနစ်တခုလုပ်ပါ။ တကြိမ်တခါလာသည့် ဖောက်သည်ကို ပုံမှန်လာပါစေ။
ဖောက်သည်များကို စွဲဆောင်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုပြုပါ။ အသိပေးချက်များပေးပို့ကာ တန်ဖိုးရှိသော တုန့်ပြန်မှုများရယူပါ။
သင့်ကဖေးဆိုင်(သို့)လက်လီဆိုင်နှင့်ကိုက်ညီသည့် Loyverse POSဆော့လ်ဝဲ